नाट्यप्रेमीहरुका लागि नाटक ‘सिरुमारानी’ पोखरा थिएटरमा - पोखरा समाचार
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार २१:५५ 14/02/2018 पोखरा समाचार
राजाराम पौडेल/पोखरा । प्रदेश नं. ४ को पहिलो नाटकघर पोखरा थियटर बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. ४ मा अवस्थित थिएटर तथा थिएटरद्धारा सञ्चालित गन्र्धव नाटकघरको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त्त श्रेष्ठ र कास्की क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रविन्द्र अधिकारीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
समारोहमा बोल्दै दुवै जनाले पोखरा थिएटर उद्घाटन गर्न पाउनु आफुहरुको अहोभाग्य भएको बताए । पोखरा थिएटर र पोखरेली रगंमञ्चप्रति सधै साथ, सहयोग रहने प्रतिवद्धता दुवैजनाले गरे । थिएटरका संरक्षक शंकरनाथ कोइरालाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा रंगकर्मी सुनिल पोखरेल, लोक गायिका हरिदेवी कोइराला, संस्कृतिकर्मी तिर्थ श्रेष्ठ, मञ्डला थिएटरका निर्देशक राजन खतिवडा, पोखरा थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तन कार्की, सल्लाहकार रुपेन्द्र प्रभाबी लगायतले पोखरेली रगंमञ्च र पोखरा थिएटरको बारेमा भनाई राखे । नाटकघर सञ्चालनमा आएसँगै पोखरेली रगंमञ्चले नयाँ गती लिने अपेक्षा सहभागी सबैको थियो । थिएटरमा परिवर्तन कार्की, दिलप्रसाद गुरुङ र शंकरनाथ कोइरालाको संयुक्त लगानी रेहेको छ ।
उद्घाटनसँगै पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा नाटक ‘सिरुमारानी’ मञ्चन भयो । यो नाटक मञ्चन सँगै थियटर हलमा बसेर नाटक हेर्ने पोखरेलीको वर्षाेदेखिको सपना पुरा भएको छ । नाटक हेरीसकेपछि दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदा कलाकार उत्साहित बनेका छन् । झण्डै दूई घण्टा लामो नाटकले छिनमा हसाँउछ । छिनमा रुवाउँछ । घरी गम्भीर बनाउँछ । नाटकमा प्रयोग गरिएको लाइट सिस्टम, टिपिकल बाजा, नेपालीपन झल्कने लवज, भेषभुषाले दर्शकलाई आर्कषित गर्छ ।
सर्वसाधरणको लागि नाटक फागुन ३ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म हरेक साँझ पौने पाँच बजेबाट मञ्चन हुनेछ । शनिबार र विदाको दिन दिउँसो १ बजेबाट अतिरिक्त सो समेत हुनेछ । नाटक हेर्न तीन सय र पाँच सय दरको टिकट काट्नुपर्नेछ । विद्यार्थीको हकमा एक सय दरको टिकट लाग्नेछ । नाटकघरमा पुगेर नाटकको वास्तविक स्वाद लिन सबै नाट्यप्रेमीमा थिएटर अध्यक्ष परिवर्तन कार्कीको आग्रह छ ।